DO oo shaqaale kala direeysa - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Agneta Broberg, madaxa hayadda ka hor-tagga faqooqa. Sawirle: Maja Suslin / TT.)
DO oo shaqaale kala direeysa
La cusbooneeyay onsdag 16 september 2015 kl 16.53
La daabacay onsdag 16 september 2015 kl 11.00
Inkasta oo dawladdu jimcadii ina dhaaftay ku dhawaaqday inay miisaaniyad 10 milyan oo dheeri ah siin doonto wakiilka ka hor-tagga faqooqa ayaan wax laga bedeli doonin shaqaalihii hayadda laga ruqseeyey kuleeylihii oo gaarsiisnaa 7 boqolkiiba shaqaalaha hayadda ka howl-gala. Waxaa middaa cadeeysay madaxa DO Agneta Broberg oo u warrameeysay laanta idaacadda ee Radio Sweden.
10-ka milyan waxaan u isticmaali doonnaa sidii aan miisaaniyadda ugu dheeli tiri laheyn, sida ay sheegtay Broberg.
Sababta dhow sannadood miisaaniyaddayadu aanay u dheeli-tirneyn ayay ugu wacan tahay aaladaha shaqada iyo is-gaarsiinta casriga ah oo aannu isticmaalno oo gaboobey, una baahan in casriyeeyn lagu sameeyo.
In DO ay iminka xoogga isugu geeysay sidii teknoloojiyada ay u casriyeeyn lahayd ayaa saameeyn ku yeelatay howlihii ay hayaddu u xil-saarnayd.
Waxaa la joojiyey aqoon-kororsiyadii hayaddu bixin jirtay, kana mid ah howlaha hayaddu u xil-saaran tahay ee faqooqa looga hor-tegeyo:
DO ma ka soo bixi kartaa masuuliyaddeeda, xitaa haddii koorasyadii la joojiyey?
- Haa, kolka aannu leenahey koorasyadii waa la joojiyey ma ahan mid dhab ah, waxaan uga jeednaa un kuwii la xiriirey koorasyadii joogtada ahaa. Waxaan ula jeedaa koorasyada aannu qabanno oo ciddii doontaaba iska soo diiwaan-gelin karto. Howlahaa ayaa la joojiyey. Laakiin weli koorasyo wey socdaan. Sida tusaale ahaan kuwa la xiriira xuquuqda, waxaannu tacliin bixinnaa markii howl noocaasi ah nala faro.